राम्रो काम गर्न सत्तामा बस्नुपर्छ भन्ने छैनः सोनु सुद!:: Mero Desh
राम्रो काम गर्न सत्तामा बस्नुपर्छ भन्ने छैनः सोनु सुद!
Published on: २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०८:०५
‘केही दिन अगाडि बलिउड नायिका हुमा कुरेशी ले बलिउड कलाकार सोनु सुदलाई भारतको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आग्रह गरेकी थिइन् । सोनु प्रधानमन्त्रीका रुपमा चुनावमा उठेको खण्डमा आफूले भोट हाल्ने हुमाको तर्क थियो ।’
‘सोनुले हालै मात्र एक वेवसाइटसँगको कुरा कानी गर्दै यो बिषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्–‘यो अली धेरै नै भयो । यदि, हुमालाई यस्तो लाग्छ भने पक्कै पनि मैले केही राम्रो काम गरेको हुनुपर्छ । तर, म उनीसँग सहमत छैन । हामीसँग स”क्षम प्रधानमन्त्री छन् ।’
‘उनले, आफ्नो काँधमा यो जिम्मेवारी उठाउनका लागि आफू निकै सानो भएको बताएका छन् । सोनुले राजीव गा’न्धी ४० बर्षमै प्रधानमन्त्री भए को स्मरण गर्र्दै आफू सँग राजनीतिको अनुभव कम भ’एको बताए । उनले, आफू र आफ्नो परि वार राजनीतिबाट निकै टाढा रहेको पनि बताए का छन् ।’
‘सोनुले राम्रो काम गर्नका लागि सत्ता र पदको आ’वश्यक ता नभएको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्–‘म लाई काम गर्न मन पर्छ । म एक क’लाकारको नाताले नै यो कुरामा रमाइ रहेको छु । मलाई लाग्छ कि, हामी सत्ता मा कुनै पद नपाएर पनि यी कामहरु गर्न सक्छौं ।’
यो पनि,,नेपाल आइपुग्यो अष्ट्रेलियाबाट आएको अत्या,व’श्यक स्वास्थ्य सामाग्री
‘अष्ट्रेलिया सरकारले नेपाललाई कोभिड-१९ माहामा`री वि`रू`द्ध अग्रप`ङ्क्तिमा कार्यरत ब्यक्तिलाई अत्या`व स्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री हरु प्रदा`न गरेको छ।अष्ट्रेलि याली वा`यु सेनाको विशेष वि`मा`नबाट शनिबार त्रिभु वन अन्तर्रा ष्ट्रिय विमानस्थल ल्याईएका सो सामाग्रीहरु’
‘नेपालका लागिअष्ट्रेलियली राजदूत फेलीसीटी वोल्कले नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी श्री प्रभुराम शर्मा लाई हस्तान्तरण गरेकी छन्।उक्त सामाग्रीहरु हस्ता`न्तरण गर्दै राजदूत वोल्कले दक्षिण एसियाका मित्रलाई सहयोग गर्ने अष्ट्रेलि याको क्षेत्रीय कार्य स्वरुप श्रीलंका, भारत र नेपाल मा उक्त स्वास्थ्य सामाग्री ल्याईएको बताइन्।’
‘उनले नेपाली सेनाले अग्रपङ्क्तिमा रहेर देशभर समुदाय मापुर्‍याएको महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाको सरहाना गर्दै यस कार्यलाई थप सहयोग गर्न अस्पताल, आईसोलेसन केन्द्र हरु र शव ब्यवस्था पन स्थलहरुमा प्रयोग गर्न उक्त सामा ग्रीहरु प्रदा न गरिएको बताइन्।’
‘क्षेत्रीय देशसँगै अष्ट्रेलियाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अग्र पङ्क्तिमा कार्यरत ब्यक्तिलाई पिपिई लगाएतका अत्याव श्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरु प्रदा`न गर्न सहकार्य गरिरहेको छ।’
‘अष्ट्रेलिया र नेपालको लामो समयदेखि बि,प,द् का समयमा सहकार्य गर्ने ईतिहास रहेको छर आजको यो सहयोगले नेपालीहरु प्रति अष्ट्रेलिया लीहरुको स,द्भा,व प्रदर्शन गर्ने उनले बताइन्।’
‘आज ल्याईएका १८ लाख अष्ट्रेलियाली डलर मूल्यका सामाग्रीहरु नेपाली सेनाको अनुरो`ध अनुरुप वेस्टर्न अष्ट्रेलिया सरकारले प्रदानगरेको सर्जीकल मास्क, फेश शील्ड र पञ्जाहरु रहेका छन् ।’
‘यो सहयोग नेपालमा कार्यरत गै,ह्रस`रकारी संस्था हरु मार्फत अस्पतालहरु का लागि अक्सि जन र स्वास्थ्य सामाग्री र स्वास्थ्यकर्मीहरु लाई प्रदा,न गरिने तालीमाका लागि गत मे २१मा घो,षित ७० लाख अष्ट्रेलियाली डलर बाहेकको थप सहयोग हो।’
‘अष्ट्रेलियाली सरकारले कोभ्याक्सको माध्यम बाट नेपाल लाई कोभिड-१९ बि,रुद्दको सुरक्षित र प्र,भावकारी खोप ब्यवस्थापन गर्न सहयोग जारी रहेको छ। सेतोपाटि बाट’